ODF? Yaa jamaa maanguddoowwaan ODF biyya galan kuni maaliif miidiyaa habashootaarratti olba’anii waan qaanessaafi jibbisiisuu xebenu? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODF? Yaa jamaa maanguddoowwaan ODF biyya galan kuni maaliif miidiyaa habashootaarratti olba’anii waan qaanessaafi jibbisiisuu xebenu?
Silaa Miseensi isaanis jaarmiyichis walumatti nama 4-6 ti maaf ammoo haasaa ajaa’aadhaan qilleensa Qeerroo Bilisummaa Oromoo qulqulluufi kaayyoo qabu sana laaqumee? Maal egaa akkuma galanitti silaa akka dhaabaattoo itti fufuu hindanda’aniiti waanuma OPDO jalatti darbattu funaannatanii yoo jiraatan? Feeetuu jiruu dacheerraa waggaa 5 caalaa isaan hinhafneef jecha dubbii lallaaquu maaltu fide? Miidiyaa gantuurratti ba’anii #ABO hamachuun maaf dhufe? OFC kan akka dhaaba guddaatti socho’aa jirullee ABO ala siyaasni biyyichaa akka furama hinarganne himewooti. Namootiin afaan maanguddoota kanaa dubbachuu dandeessan mee itti dubbadhaa. Keessumaa #WarreenDiyaasfooraa kanarraa qilleensa faalaa turtan namootiin sadii afur hincaalleen sun!
”Waxabajjii 09/2018 #TV_Nahoo jedhamu irratti ka gocha diinummaa calaqqisu dubbate.
Gaaffii gaazexeessaan dhiheessef; sababa maaliitiin ADO hundeessuu dandessaan?
Dr. Diimaa 1).Addi Bilisummaa Oromoo waan “Damage” ta’ee qabsoo gaggeessuu waan dadhabeef.
2). Heeraa fi Sagantaa diyaasaa ABO irratti ”mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo” waan itti hin amanneef, haala yeroo waliin hin deemnee fi gaaffii sabummaa irraa gara Biyyaatti guddachuun waan barbaachiseef dhaaba kana hundeessine jedhan.
Gaaffii itti aantuu; Heera biyya Xophiyaa keewwata 39 irratti, mirga hiree murteeffannaa sabootaa hanga foxxoquutti jedhus ni jira. Isin Kana ni mormitu jechuudhakaa? jedhuu gaafannaan dubbiin kallattii jijjiirate.
Deebiin Dr.Diimaan kennan qaanessaa fi yaada dura ibsee tureen Waan wal faallessuu fi wal dhiitudha. Warra akkasiitu...maalif garuu!?!
— Kichuu (@kichuu24) June 8, 2018
Motumman wayyane Oromo walloorati
Lola gadifi olin hakuma labseti jira
Hakumaa walloo Anaa baatrrati Lola labsa ture
Anaa dawwee harwaatiis
Liyu polisin affaar irati dushisa jira
Qeerroon Dawwee harwaatiis halaa kana of qopesa jiran
Kesafii Alan Wal quba haa qabanu yaa Oromo
Qeeroo itti mudi
Waxabajjii 8/2018 Konfiraansii Dhimma Haala Yeroofi Imammaata Kufaatii Sirna Garboomsaa Booda Oromiyaafi Waligalatti Biyyaattiif Barbaachisu Wixinuuf Qophaa’ee Adeemsifamaa jiru Irraatti Qophii Simannaa Addaa Beektoota, Hooggantoota ABO fi Gaazexeessitoota Oromoo hedduu of keessaa qabuuf Giddu-gala Mooraa Leenjii WBOtti godhame!!